Dalxiiskii Guriga Oo Sii Socda Dib U Soo Noqoshadiisii ​​Iyadoo Safarkii Caalamiga Ahaa Mid Hakad Ku Jira | Warka Dalxiiska ee Masuulka ah
Bogga ugu weyn » Warka Dalxiiska ee Masuulka ah » Dalxiiska Gudaha ayaa Sii Socda Dib U Soo Noqoshada Halka Safarkii Caalamiga Ahaa Mid Hakad Ku Jira
Dalxiiska Gudaha ayaa Sii Socda Dib U Soo Noqoshada Halka Safarkii Caalamiga Ahaa Mid Hakad Ku Jira
Intii u dhaxeysay Janaayo iyo May, dalxiisayaasha caalamiga ah waxay 85% ka hooseeyeen heerarka 2019.
Meelaha aduunku tagayo waxay diiwaangeliyeen 147 milyan oo ka yar soo-galayaasha caalamiga marka la barbar dhigo isla muddadaas 2020.
Isbadal xoogaa kor u kacay ayaa soo ifbaxay iyadoo meelaha qaarkood ay bilaabeen inay yareeyaan xayiraadaha isla markaana kalsoonida macaamiisha ay in yar kor u kacday.
Dalxiiska caalamiga ah si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa, in kasta oo soo kabashada ay wali tahay mid jilicsan oo aan sinnayn.
Dhibaatada ugu weyn ee taariikhda dalxiiska ayaa sii socota illaa sanadka labaad. Intii u dhaxeysay Janaayo iyo May, dalxiisayaasha caalamiga ah waxay 85% ka hooseeyeen heerarka 2019 (ama 65% hoos u dhac 2020), xogta ugu dambeysay waxay muujineysaa.
In kasta oo kor u kac yar bishii May, soo ifbixintii Covid-19 noocyada kala duwan iyo xayiraadaha sii socda ee xayiraadaha ayaa culeys ku ah soo kabashada safarka caalamiga ah. Dhanka kale, dalxiiskii gudaha ayaa wali ku soo laabanaya meelo badan oo adduunka ah.
Xogta ugu dambeysa waxay muujineysaa in shantii bilood ee ugu horreysay sanadka, meelaha adduunka la aado laga diiwaan geliyey 147 milyan oo ka yar soo-galootiga caalamiga ah (booqdayaasha habeenki) marka la barbardhigo isla muddadaas ee 2020, ama 460 milyan ka yar sanadkii hore ee safka faafa ee 2019. Hase yeeshe, xogta waxay tilmaamaysaa kor u kac yar oo ku yimid Bisha May, iyadoo dadka soo galaya ay hoos u dhacayaan 82% (oo ka soo horjeedka Meey 2019), ka dib markii ay hoos ugu dhacday 86% bishii Abriil. Isbeddelkan yar ee kor u kacay ayaa soo ifbaxay iyadoo meelaha qaarkood loo bilaabay inay fududeeyaan xaddidaadaha isla markaana kalsoonida macmiilku xoogaa kor u kacday.
Gobollada, Aasiya iyo Baasifigga waxay ku sii socdeen hoos u dhacii ugu weynaa iyadoo 95% hoos u dhac ku yimid soogalootiga caalamiga ah shantii bilood ee ugu horreysay sannadka 2021 marka la barbar dhigo isla muddadaas 2019. Yurub (-85%) ayaa diiwaangelisay hoos u dhaca labaad ee ugu weyn ee soo galootiga, waxaa ku xiga Bariga Dhexe (-83%) iyo Afrika (-81%). Ameerika (-72%) waxay arkeen hoos u dhac yar marka loo eego. Bishii Juunyo, tirada meelaha la aadayo ee gebi ahaanba xiritaanka xuduudaha waxay hoos u dhacday 63, laga bilaabo 69 bishii Febraayo. 33 ka mid ah waxay ku sugnaayeen Aasiya iyo Baasifigga, halka toddobo kaliya ay ku yaalliin Yurub, gobolka leh xaddidaadaha ugu yar ee safarka hadda jira.
Gobol hoosaadyo, Kariibiyaanka (-60%) waxay diiwaan geliyeen waxqabadka ugu wanaagsan ee qaraabada illaa May 2021. Safarka ka soo koraya ee Mareykanka wuxuu ka faa'iideystay meelaha loo safro ee Caribbean-ka iyo Bartamaha Ameerika, iyo sidoo kale Mexico. Galbeedka Yurub, Koonfurta iyo Yurubta Yurub, Koonfurta Ameerika iyo Bartamaha Ameerika waxay arkeen natiijooyin waxoogaa ka wanaagsan bishii Maajo marka loo eego bishii Abriil.
Dalxiiska caalamiga ah si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa, in kasta oo soo kabashada ay wali tahay mid jilicsan oo aan sinnayn. Welwelka isa soo taray ee ka jira Delta noocyada virus-ka ayaa u horseeday dalal dhowr ah inay dib ugu soo celiyaan tallaabooyin xaddidan. Intaas waxaa sii dheer, jahwareerka iyo la'aanta macluumaad cad oo ku saabsan shuruudaha gelitaanka waxay sii wadi kartaa inay culeys saarto dib u bilaabashada safarka caalamiga ah inta lagu jiro xilliga xagaaga ee Waqooyiga Hemisphere. Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada tallaalka adduunka oo dhan, oo ay weheliso xaddidaadyo jilicsan oo loogu talagalay dadka safraya ee la tallaalay iyo adeegsiga aaladaha dijitaalka ah sida Shahaadada EU Digital COVID, dhammaantood waxay gacan ka geystaan ​​tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah.
Intaas waxaa sii dheer, socdaalka gudaha wuxuu horseedaa soo kabashada meelo badan, gaar ahaan kuwa leh suuqyo waaweyn oo gudaha ah. Awoodda kursiga hawada ee gudaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa horay uga sii gudbay heerarka dhibaatada ka hor, halka safarka gudaha ee Mareykanka uu sii xoogeysanayo.